Naghachi ehichapụ iPad Edeturu, Photos, Videos, kọntaktsị, kalinda, wdg a
Ehichapụ Notes, Kalinda, Photos, Ndi ana-akpo, na Vidoes si iPad (iOS 9 gụnyere)
Iji hụ na ihe ịga nke ọma na-agbake ehichapụ faịlụ site iPad (iOS 9), biko kwụsị iji gị iPad ugbu a na-ahụ a na kọmputa dị nso, na-akwadebe maka iPad ehichapụ faịlụ mgbake. Ọ bụrụ na ị na-anọgide na-eji gị iPad, ohere nke ihe ịga nke ọma na-agbake iPad ehichapụ faịlụ ga-aghọ obere.
M nwere ẹdude Cheta na m na-edezi ụnyaahụ na n'ụzọ ụfọdụ m kụrụ a isi Nchikota na-ehichapụ niile ederede na Cheta (dị nnọọ ọtụtụ). Achọpụtawo m kemgbe na Wepu isi na keyboard ma nke a na-agaghị weghachi ederede na-ehichapụ. M gbalịrị ihe niile na-agbake ya ma ọ dịghị chi. Na-Notes synced na iTunes? Ọ bụrụ otú ahụ, olee ebe m chọta ha? Ihe ọ bụla echiche na otú naghachi m Cheta? N'ihi!
Ọ na-eme mgbe niile na mgbe ị na-agbalị idezi ma ọ bụ sirila ndetu, kalenda, kọntaktị, foto, ma ọ bụ vidiyo na gị iPad, ị na-enweta Nhichapụ isi unconsiously. Na ị ga-achọta a Kagbuo isi dị na gị iPad ka ị na-azụ ihe ị na-ehichapụ. N'ihi nke a, ndị mmadụ mgbe niile mkpesa ma ọ bụ mwute ha nzuzu edinam. N'ezie, faịlụ na ị ihichapụ si gị iPad alaghị. Ha ka na-adị ebe gị iPad (iOS 9), ma apụghị ịhụ anya. Na a ọkachamara iPad Iweghachite Software ngwá ọrụ, ị nwere ike naghachi ha gị na kọmputa maka mgbe e mesịrị na-ebufe azụ iPad ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-amaghị ihe ọ bụla software naghachi ihichapụ faịlụ na iPad, na-agbalị ụwa mbụ Iweghachite Ngwá Ọrụ - Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery).
iPad Iweghachite Software - Naghachi ehichapụ faịlụ site iPad
3 mgbake ụdịdị eme ka o kwe naghachi faịlụ na-enweghị a ndabere faịlụ;
Ofụri Esịt-akwado kọntaktị, foto, na kalenda, na ndetu, ibe edokọbara, na vidiyo na mgbake;
Selectively ịhụchalụ na-agbake ọ bụla data ị chọrọ na gị iPad;
Atụmatụ: ezie na nke a software bụ shareware, ị nwere ike mbụ download free ikpe version ike iṅomi gị iPad maka ehichapụ faịlụ. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ịhụ gị ehichapụ faịlụ, ọ pụtara na ị nwere ike iji ya na-agbake a niile hụrụ faịlụ. N'okpuru ebe a bụ 3 ụzọ i nwere ike na-agbalị a software naghachi ehichapụ iPad faịlụ.
Nkebi nke 1: Kpọmkwem iṅomi gị iPad naghachi data na ya Part 2: selectively naghachi ehichapụ iPad si iTunes ndabere Part 3: weghachite ehichapụ iPad data si iCloud ndabere
Nkebi nke 1: Kpọmkwem iṅomi gị iPad naghachi data na ya
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPad na ike iṅomi ya
Nke mbụ niile, na-agba ọsọ usoro ihe omume gị na Mac. Mgbe ahụ jikọọ gị iPad na kọmputa. Ozugbo gị iPad a ghọtara, ị ga-ahụ na windo n'okpuru. Pịa na Malite button na-amalite ịgụ isiokwu ya. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPad 1, ị nwekwara ike ịgbanwee gaa na ihe Advanced Mode iji nweta a miri iṅomi. Ọ na-enyere gị aka ịchọta ndị ọzọ furu efu data na ya.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake iPad data
Mgbe iṅomi zuru ezu, ị nwere ike ịlele niile data hụrụ na ya na edemede. Pịa ha otu otu na ịhụchalụ ọdịnaya. Tinye akà rà na ihe ịchọrọ na-azọpụta ha na kọmputa gị site na ịpị Naghachi bọtịnụ.
Nkebi nke 2: selectively naghachi ehichapụ iPad si iTunes ndabere
Ọ bụrụ na ị furu efu gị iPad (iOS 9), ma ọ bụ na ọ bụ nanị bụghị mgbe aka, ị nwere ike họrọ naghachi gị iPad si iTunes ndabere mgbe ị synced ya iTunes-adịbeghị anya. Ọ na-ewe gị nzọụkwụ abụọ, ma ị nwere ike ihuchalu ọdịnaya niile na selectively naghachi ihe ị chọrọ site na ya.
Nzọụkwụ 1 Họrọ gị iTunes ndabere ma wepụ ya
Gaa na mgbake mode nke naputa site na iTunes ndabere File mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga na-akpaghị aka ịhụ niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị na-eweputa ha gị dị ka a ndepụta. Họrọ onye na maka gị iPad na pịa na Malite iṅomi bọtịnụ wepụ ya.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake iPad data si iTunes ndabere
Ya-enye gị ka ịhụchalụ niile data dị na iTunes ndabere, gụnyere ẹdude na-ehichapụ otu. Dị nnọọ ego ha otu otu na nne Mmetụta ihe ị chọrọ. Mgbe ahụ na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Nkebi nke 3: weghachite ehichapụ iPad data si iCloud ndabere
E wezụga na-eweghachiri dum iCloud ndabere faịlụ, e nwekwara ụzọ ọzọ iweghachi gị iCloud ndabere ugbu a: preview mbụ, selectively ahọrọ na-agbake. Nke ahụ bụ ihe Wondershare Dr.Fone maka iOS enye gị ohere ime. Ka ego otú nzọụkwụ-aga.
Họrọ mgbake mode nke naputa site na iCloud ndabere File mgbe ị na ulo oru usoro ihe omume. Mgbe ahụ ị pụrụ abanye na gị Apple ID site na itinye akaụntụ na paswọọdụ. Mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-egosi gị niile ndabere faịlụ na akaụntụ gị. Họrọ maka gị iPad (iOS 9) ibudata na iṅomi ya.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake iPad faịlụ site na iCloud ndabere
Doppler-ewe gị nnọọ a nkeji ole na ole. Dị nnọọ nweta onwe gị a iko kọfị. Ozugbo ọ na-akwụsị, ị nwere ike na-ele niile hụrụ data na Doppler N'ihi. Lelee ha otu otu na akara na ihe ịchọrọ ndabere. Wee chekwaa ha na gị na Mac na otu Pịa.
> Resource> iPad> Olee naghachi ehichapụ iPad foto, ndetu, Videos, ana-akpo & Kalinda